Habasha waliin dubachaa Habashaa irrati qabsa’uun hin danda’mu. Habashan yoomi ilee fira qabsoo keenya miti.
Qabsoon Oromoo kan egalameef feedhi angoo ykn feedhi qabeenyaaf utuu hin tanee enyuuma Oromoo sarbamee deebsuuf, mirga Oromoo dhitamee biyya isaa irrati qaneefatee qaanii jala basuuf malee feedhi gartuu tokko gutuuf ykn dhaabba tokko itti tayitta irra basuuf miti. Kanaaf qabsoon kun qabsoo ummataa Oromooti, murtee olanaa ilee kan murteefatuu ummata rakko keessa wagga 130 jiracha jiruu kana kan jeenuuf. Dhiyyenya kana garuu dhaabbilee Oromoo tokko tokko qabsoo Oromoo fi feedhi ummata Oromoo kana akkuma waan Kisha isaan keessa jiruti irrati murteesuf akka danda’aanti dubacha jiru. Kana keessa tokko Keeyaati 39 feedhi fi gaafi Oromoo miti jeedhame yaamuu dubatamuu dhaga’uun nama qanfachisa.
Oromo diina fi fira walalee jira, Oromo heedun fira isaa waliin dubachuu mana diina isaa waliin dubachuu mararfata kun amoo walaluma. Namii diina yerro dheera fi dhina yerro gababa walalu qabsoo gegesuuf waliin deemun nama rakkisa. Sababin isaa rakkon Oromo marsee Ganfaa Afrika kana keesssa jiru gurgudan furuuf walii mariachuu utuu qabnuu diinoota keenya madda rakko kana ta’aan waliin dubachuuuf dursaa keenun dogogora.
1. Nami tokko guyya humna qabuuf guyya hunmana hin qabnee marii hin goodhuu bu’’aan isaa walii qixee miti. Utuu humna keenya hin tilmamin ykn dandeeti kara hunda qabnuu utuu hin cimmsatin dorgomuuf deemun boojiamudha.
2. Ormoon dhimmi kun nu ilaalata jeedhuu heedun utuu jiru qamlee murasii Habashaa diina keenya ta’aan wali maraachuun Oromoo lamafa Meshaa habasha bachiisuf yaaluun bala gudda qaba.
3. Haali Gaanfa Africa rakko guddati deema jira, uni garuu qoophe hin qabnu kana ilee mariiachuu fi of qapheesuu yerro qabnuu kana keessati diina nu baleesuuf jeedhuti heerumuf ykn iti firomuu yaalun yakka.
4. Ethiopia fi Eritrea giduu rakko jiruu fi hariroo gara fulla durati dhuuf malu ilee xinxalun lola hama ka’uu maluu ykn jijirama dhuuf maluu hubacha hin jiru.
5. Haala laga Abayya fi Haala Fillaanno Sudan wali qabatee namoon keenya heeduu of qoopheessa jiru kun utuu diin iti fayyadamee nu irra hin deemin iti fayadamuun yaalama jira garuu wali hubacha fi wal dhaga'aa hin jiru.
6. Rakkon Somalia kan yerro kami irra hamacha deema jiru kun kara lama bala nu qaba waan kanaaf mali akka yaanee irrati marii goochuun fi ijeennnoo wali fakkata qabachuun barbachisadha.
7. Ethiopian rakko dhufaa jiru kana dursitee ilalun fruma Djibuti, Sudan, Hargeessa-Somalia, Kenya fi Uganda cimmssa jirti kun ilee bala nuuf qaba uni ilee faala kana ta'uu fira dhiyoo horachuun isaama iyuu irrati walii galuun ni barbachisa ture.
8. Waluma galati murteen harra murteesinu bori rakko Oromo hunda keeya ta’uu mala kanaafu waan boor rakko ummata keenya irrati fiiduu maluu harra wali maria’cha deemun dirqama. Kun ta’uu banan waan saba keenyaaf hin malee dafnee dura dhabachuun dirqama Oromoo hundati.
Waan Oromon Jeecha jiru Dhaabbilee Oromoo tokko tokko fudhacha hin jira. Umman Oromoo kan jeecha jiru Dhaabbilee Oromoo qulquluu ta'aan ijoole Oromo akka tokkumma umman, tumsa ijaratan ykn akka dhaabba tokko jala hiriran qabsoo safsisan gaafacha jira malee akka Habasha waliin tokko ta'aan gaafacha jira miti.
Kan dura gaafi ummatii Oromoo fi baratoota Oromootiin WFDO fi OBK akka wal ta'aan goodhamee ture. Akka dhaabba Oromoo tokkoti ummataa isaaniif qabsa'uun amanta ummata qaban jabeefachuu dhisani yerro Murasa Keessati Dr. Merara Gudinan harkifama Mederak keessa seenan. Achi isaa galan amoo ganama barii kani utuu nami isaan hin reebin Keyyata 39 Oromoon hin barbaduu jeedhan labsan kun yakka gudadha. Ilman Oromoo heedun Oromoon mirga isaa of isaan hamurteefatuu jeedhe lubu isaa iti dhabbe kun feedhi Oromo utuu hin tane feedhi TPLF jeechun isaan walaluma. Utuuma isaan gorsinu gorsa Oromoo irra gorsaa MADRAK amanan qannii guddan ijaa Oromo dura deeman. Waan ama nuti dhufaa jiruu amoo qaanii erga dhalanee hin dhaga’iin dhaga’uuf deemna. Kanaaf waan diina Oromoo waliin tumsa horachuun bala qaba dhisaa.
Oromo ilman Habasha waliin tokumma umachuun haafnan Oromoo Habasha irra Bituun fi iti Gurgurn dhorkadha, Habasha Fudhu ykn iti Heerumn dhorkadha, Mana Nyata Habashati nyachun, Konkolata habasha yabun, Mana Barumsa ykn Koleegi Habashati barachuun dhorkadha jeedhamee erga labsamee wagga heedudha. Ummata kana hin goodhin jeedhan barsisa ba'aan duba deebiyan Habasha waliin tokkomuu yaalun yakka gudhadha. Dhabbilee bilisumma Oromoof lola jeedhan of jala galagalan Habasha waliin tumsa horana jeedhuun keessatu jibinsa gudda wara Oromoo irrati qaban Nafxanyoota Amhara waliin dhabachuun Oromoo fi qabsoo Oromoo ganu ta'uu hubachuu qabna. Habashan yoomi ilee fira qabsoo Oromoo waan hin taneef.
Dhaabbi Habashoota waliin tokkuma ijaarachuu barbaduun keessatu siirnaa nafxanya waraa deebisuuf yaalan waliin dhabachuun fi mariachuun Kayyoo Ganama sun ganuu waan ta’eef TPLF/OPDO caalaa balaleefatamuu qabu. TPLF/OPDOn maqaf ilee hatatuu malee mirgi Oromoo kabajamuu qaba, Afaan Oromoo Oromiyya keessati Afaan hoji ta'ee Oromoon afaan isaan adda isaa gudifachuu qaba jeedhan wara dubatani dha. Oromoon Mootuummaa Naannoo Oromiyya ijaratee nama isaan of bulchuu qaba jeecha jiru. Habashoon Amhara garuu Mootumman naannoo akka baduu, lammuuman ijaramu akka hafuu, Biyya tokko Ethiopia, Bandira tokko, Afaan tokko Amharnya, Addaa tokko Ethiopyumma jeechuun wara falma jiruti araramun Oromoo kara dudadubee waranuu ta'aa, kun amoo dhaabba lubun Oromo meeqa iti kafalamee kana baleesuu ta'aa.
Garuu Qabsoo Oromoo warii feedhan yerro tokko keessati wal ta'aan jijirama wagga 40 keessati hin argamin akka fidhuu danda'aan hamilee fi humna keenaaf. Waan qabsoo keenya kana qancaarssa turee ilee ifaa ba'uuf deema jira. Kanaafu akka dhaabbatis ta'ee akka miseensati ykn akkuma lammi Oromoo tokkoti Habasha Oromoo Haraka fi Harma muree amalee guyya guyyan ajeessa jiruu waliin hojeechun dhigga wareegamtootan harka dhiqachuu ta'aa kana irrati waliif dhisuu hin dandeenyuu.
Oromiyyan ni Bilisoomitti!!!